Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas oo ka hadlay dagaalka magaalada Buuhoodle iyo Xaaladda oo degan. | SAHAN ONLINE
Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas oo ka hadlay dagaalka magaalada Buuhoodle iyo Xaaladda oo degan.
GAROOWE – Madaxweynaha Dowladda Puntland Dr Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ku sugan magaalada Madiina ayaa ka codsaday beelaha walaaha ah ee dagaalka ku dhexmaray magaalada Buuhoodle ee caasimada gobolka Cayn,dagaalkaaasi oo dhimasho iyo dhaawacba geystay.
Madaxweyne Gaas ayaa u sheegay beelaha walaaha inaan loo baahneyn in la daadiyo dhiigga dadka wadda-dhashay ee ku sugan Buuhoodle,wuxuuna ugu baaqay dhammaan Xukuumadda iyo Shacabka in laga wada shaqeeyo joojinta dagaaladaas iyo sidii loogu soo dabaali lahaa khilaafkaas wadda-hadal iyo Is-fahan.
Dhanka kale ,waxaa maanta degan xaalada magaalada Buuhoodle ,waxaana socota waan-waan nabaded oo ay waddaan Odayaasha dhaqan,culuma’udiinka iyo Waxgaradka degaanka oo lagu doonayo in lagu joojiyo colaadaas.
Iska horimaadka dagaal ayaa waxaa ku geeriyooday dad gaaraya 8 qof halka tira kalena dhaawac soo gaaray,waxaana uu dagaalku salka ku hayaa aano qabiil oo u dhaxeysa beelaha Cali Gari iyo Reer Hagar oo ka wada tirsan beesha Dhulbahante.